PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-22 - Beyinyathelana intsha ifesele owamaphoyisa
Beyinyathelana intsha ifesele owamaphoyisa
Isolezwe ngeSonto - 2017-10-22 - IZINDABA -
IZINKUMBI zentsha yaseThekwini namaphethelo zithutheleke eLahee Park, ePinetown, ngoLwesihlanu ngenhloso yokuthola izikhala embuthweni wamaphoyisa kaMasipala weTheku. Bekumenyezelwe ukuthi kufuneka abantu abazoba amaphoyisa.
Bese kuphele iminyaka eyishumi kwagcina ukukhangiswa kwezikhala zamaphoyisa omkhandlu.
Okhulumela lo mbutho uSenior Superintendent Parboo Sewpersad, uthe kushaye ihora lesithathu ntambama sekungene izicelo ezingu-10 000. Uthe abangu-200 abaphumelele bazoqashwa maduze nje, wathi abanye abangu 200 bazoqashwa ngoFebhuwari, nomunye u-200 uzophinde uqashwe ngo-Agasti nangoFebhuwari 2019. Lezi zinkumbi zabantu beziphendula kwisikhangiso esishicilelwe ebhukwini likamasipala. Lo msebenzi wokuhlunga eLahee Park,uzoze uvalwe ngoNovemba 3. USewpersad uthe abantu abafuna umsebenzi bamagange, okudala ukuthi benze amaphutha ezicelweni zabo.
Esinye isikhulu kulo mbutho uSuperintendent Glen Ndlovu, sikhulume nabebezofesa sibatshela ngalo msebenzi.
“Sifuna abantu abanentshisekelo yomsebenzi, inhloso yethu wukulwa nenkohlakalo kulo mbutho.
Abanye abantu mhlawumbe bafuna ukugqoka umfaniswano wethu ukuze baqhube inkohlakalo bazicebise ngemali yokugwazelwa,’’ kusho uNdlovu.
Laba bantu abasha baveze ukuthi banenhloso efanayo yokukhuculula inkohlakalo embuthweni.
UMnuz Siyabonga Vincent Mtshali waseMariannhill, uthe unebhizinisi elincane aliqala eminyakeni eyisithupha edlule eqeda umatric.
“Inhloso yami wukulwa nenkohlakalo ngoba ngesikhathi amaphoyisa egwazelwa lokho kuholela ekufeni kwabantu abaningi emgwaqeni yethu,’’ kusho uMtshali.
UMnuz Aneliswa Tswane (29) waseMayville, uthe uma angase athole lo msebenzi ngabe uwele ngelibanzi ngoba impilo yakhe ngeke iphinde ifane.
Ngesikhathi abebezofesa befika kule ndawo bahlukaniswe imigqa emibili, omunye kube owabebephethe izimfaneli bakwazile ukushiya izicelo zabo. Omunye umugqa kwaba owabebesadinga ukuchazelwa kabanzi ngezinto ezidingekayo.
“Sibatshelile abanye ukuthi mababuyele emakhaya beyogcwalisa kahle ngoba uma begcwalisa budedengu izicelo zabo zizokonakala,’’ kusho uSewpersad.
UKWENTULEKA kwemisebenzi kubonakele ngesikhathi izinkumbi zentsha zithutheleka ziyofesela izikhala zokuqashwa embuthweni wamaphoyisa iMetro ePinetown ngoLwesihlanu Isithombe: LEON LESTRADE/ANA